Fomba Fitendrena Naoty (C =>002010)
Anarana Naoty (002010–> C)
Raha te hamadika an’ilay naoty ho Do-Re-Mi, dia tsidio Naoty (Do sa C)
Naoty fampiasa matetika
Betsaka ny hira Malagasy mahafinaritra mampiasa Tendry Gasy (i.e. Mahaleo, indrindra ny hira nosoratan’i Dadah Rabel). Afaka tendrena accord standard ihany izy ireo (ny naoty dia mitovy ihany), kanefa heno ihany hoe tsara kokoa raha tendrena amin’ny accord Gasy.
Ny olana anefa ny hira mampiasa Tendry Gasy matetika tsy voadika naoty (solfejy), satria ny ankamaroan’ny mpitendry mahay accord Gasy, tsy mila (na tsy mahay) solfejy satria efa zatra an’ilay tendry Gasy ny sofiny.
Betsaka ny tuning/accord afaka ampiasana fa ny fampiasa matetika dia ny CGDGBE (marihina fa ny standard dia EADGBE). Izany hoe ny E (0xxxxx) alatsaka ho C, ary ny A (x0xxxx) alatsaka ho G. Tsy sarotra ny manova an’ireo naoty ireo fa tsara kokoa raha mampiasa “Tuner” raha mbola tsy zatra ny sofina (betsaka ny takelaka na app efa manana Tuner amin’izao)